IScoutsee: Yenza imali ngezokuxhumana nabantu ngeSitolo Sangaphambi Kokubambisana | Martech Zone
Scoutsee is ithuluzi leselula elivumela noma ngubani ukuthi enze imali ngokwazisa ngemikhiqizo ayithandayo nayisebenzisa nsuku zonke ku-Instagram, Facebook nakuTwitter. Indlela engemuva kwesikhulumi muhle impela. Yakha isitolo sakho ku-Scoutsee, engeza imikhiqizo yakho, bese uhlelo lokusebenza leselula likwenza ukwazi ukwabelana ngezibuyekezo kuleyo mikhiqizo nge-URL efinyeziwe yomkhiqizo esitolo sakho. Uma umkhiqizo uthengwa ngeposi, umsebenzisi weScoutsee uthola ikhomishini kusuka ekuthengisweni, imvamisa iphakathi kwamaphesenti ayisithupha kuya kwayishumi entengo yokuthenga.
Abathonya ekuxhumaneni nomphakathi konke kubhekiswe kubo amathonya wokuthonya kanye nabanye abaphakathi kokuthengiselana kwama-broker ukukhuthaza imikhiqizo yomkhiqizo. I-Scoutsee inika amandla abagqugquzeli abayizigidi ku-Instagram ukwenza imisebenzi yabo, ngawodwana noma ngqo ngemikhiqizo. Ku-Instagram, kunabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyisithupha abanabalandeli abangaphezu kuka-10,000. UTom Kwon, umsunguli kanye ne-CEO yeScoutsee.
Izici ze-Scoutsee zifaka:
I-Instagram engathengwa - Qhubeka wabelana ngokuthandayo ku-Instagram bese ukhetha ukuthi yini ofuna ukuyithenga. Izithombe zomkhiqizo nokuthunyelwe ku-Instagram drive Abalandeli esitolo somsebenzisi seScoutsee semikhiqizo ekhethiwe, ngayinye enesixhumanisi esiqondile sokuthenga. Lapho kuthengiwe, ikhomishini idluliselwa ku-PayPal noma i-akhawunti yasebhange yomsebenzisi weScoutsee.
Izitolo zomuntu siqu - Yenza kalula futhi ukhuthaze imikhiqizo oyithandayo futhi oyisebenzisayo nsuku zonke.
Izigidi zemikhiqizo - Khetha imikhiqizo ezinkulungwaneni zemikhiqizo futhi uxhumanise kalula okuthunyelwe kwakho kwezenhlalo. Ikhathalogi yomkhiqizo weScoutsee iqukethe izinhlobo ezingaphezu kwezingu-8,000, kufaka phakathi i-Amazon.com, iRakuten ne-EBay, enamakhulu ezigidi zemikhiqizo kuyo yonke imikhakha.
Ideshibhodi yesikhathi sangempela - Buka uphinde uhlaziye okuthunyelwe kwakho okungathengeka kalula nokuthi isitolo sakho sangaphambili sisebenza kanjani
Landa uhlelo lokusebenza lwe-Scoutsee!
Scoutsee isebenza nemikhiqizo nama-ejensi ukuthuthukisa amaphakheji esikhuthazo wangokwezifiso wokuqasha kabusha AmaScoutsees futhi inikezela ngamadeshibhodi wokulandelela ukusebenza.
IScoutsee ihlolwe nge-beta kanti manje isihlela ukwethula ukubambisana kwayo neSpartan Race, okuyinkampani ehamba phambili yomjaho wezithiyo emhlabeni. I-Spartan Race ithuthukise umphakathi wayo onentshisekelo, okhuthaze imicimbi nemikhiqizo yendlela yokuphila ngokusebenzisa okuthunyelwe okuthengwa ngabathengi okunikwe amandla yi-Scoutsee ku-Instagram kokulandela kwabo okukhulu. Ukuchofoza ngamanani wabona ukwanda kwamadijithi aphindwe kabili kanye nokuguqulwa kwakungaphezulu kakhulu kwamazinga embonini.
Tags: ideshibhodi ehambisana nayokokujoyinainethiwekhi esebenzisana nayoIzitolo ezihambisanayoAmazoneBayukumaketha kwamathonyainstagramyezitolo zakwa-instagramrakutenumaskandiinstagram engathengwaezokuxhum ukumaketha kokusebenzisanatom kwon
I-Flurry: I-Real-Time Analytics Yezicelo Zeselula
Aug 16, 2016 ngo-7: 07 PM
Douglas, lokhu kuhle impela! Angikaze ngizwe ngalokhu phambilini kepha nakanjani ngizokubheka. Siyabonga ngokwabelana!